मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लफडा किन, कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको विवाद? – Janadesh Daily | ePaper
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लफडा किन, कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको विवाद?
September 12, 2021 by Jandesh Daily
सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन। भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालय भागबन्डा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक दुईदिन लम्बिने भएको छ।